Tuesday February 17, 2015 - 08:19:29 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka xukuumada Alsiisi ka geysteen magaalada Darnah ee dhacda Bariga Liibiya.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in dadka lalaayay badankood ay yihiin shacab rayid ah sida carruur iyo haween.
Dhaawacyada ayaa gaaraya 17 qof halka burbur xooggan uu gaaray illaa 8 guri oo kuyaal bartamaha magaalada Darna,sidoo kale diyaaradaha dagaalka Masar ayaa duqeeyay magaalada Sirta ee dhacda bartamaha Liibiya islamarkaana ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta.
Xukuumadda dabadhilifka Masar ayaa qeyb ka ah isbaheysiga sheydaaniga ah ee Mareykanka iyo dowlado carbeed ku mideysanyihiin kaasi oo dagaal kula jira muslimiinta.
Dowladda Itoobiya oo qaadday Tallaab halis ku ah Masar iyo Suudaan.